Guddoomiye Abshir: Farmaajo isaga ayaa qaadi doonna cawaaqib xumida weerarka – Goobjoog News
Guddoomiye Abshir: Farmaajo isaga ayaa qaadi doonna cawaaqib xumida weerarka
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee golaha Aqalka sare Abshir Maxamed Axmed ayaa cambaareeyey weeararka uu Farmaajo ku qaaday hoyga Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Qoraal uu soo dhigay Faceboog ayuu u yiri “Waxaan aad u cambaareynayaa weerarka uu Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Farmaajo isaga oo adeegsanaya xooggaga Duufaan iyo Gorgor ku qaaday hoyga Madaxweynihii Hore Xasan Shiikh Maxamuud. Madaxweyne hore Maxamed Farmaajo kaligiis ayaa qaadi doona cawaaqib xumada ka dhalata weeraradaas bahalnimada iyo qarandumisnimada ah.
Guddoomiye Abshir oo sii hadlaya ayaa baaq u diray ciidanka isaga oo qoray
Baaqa aan u dirayo askarta:
Askarigu wuxuu sharafta iyo karaamada Ciidanka Qaranka mutaa marka uu ilaaliyo sidoo kalena u hoggaansamo shuruucda ku qoran dastuurka gaar ahaan qodobka 127aad. Haddii uu askarigu ku guul dareysto in uu ilaaliyo, wuxuu noqonayaa maleeshiyo iyo dayday xiran dharka ciidanka, isaga ayaana qaadaya mas’uuliyada ka dhalata xadgudubya uu geysto.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur : Ciidanka Farmaajo ayaa weerar ku soo qaaday hoyga aan ka deganahay Magaalada Muqdisho
Safiirka Midowga Yurub: Waxaa La Ciqaabayaa Ciddii Leh Mas’uuliyadda Dagaalka
Midawga Musharixiinta Oo War Ka Soo Saaray Weraradii lagu Qaaday Xasan sheekh iyo Abdirahman Abdishakuur